Selim anobva kuLes Larmes du Paradis akabata vateveri nekushamisika: mushoko, wow - teles relay
Selim kubva kuMisodzi yeParadhiso yakatora mafeni nekushamisika: mune izwi, wow
Mumiriri weTurkey Berk Atan parizvino ari kutamba saSelim munhepfenyuro yerudo Cennet (Misodzi yeParadhiso) .
【NYAYA dzePARADISE stars Nyeredzi gumi nembiri dzaTélénovelas akafa uye kuti ...
Mutsigiri wemakore makumi masere nemasere, anodada nemusoro wenyaya uyo Akanyanya Muenzaniso Model weTurkey muna 28, haasi kushingairira pama social network.
Ichi ndicho chikonzero vateveri vake vechikadzi vanogara vaine zororo kana apo neapo pavanogovana cliché nyowani. Nguva ichangopfuura, akazvirumbidza nezvepikicha kubva kumufananidzo wemifananidzo wakatorwa pamwe naye nemifananidzo yeTurkey nyeredzi Cem Tatla.
Mutambi wechidiki ane chitarisiko chinotaridzika anoziva mafadza mwoyo wemukadzi uye haafanire kuratidza chete makeke ake chokoreti padumbu rake .
Kwayaka: Instagram / berkatan
TELES RELAY 16930 Posts 1 mashoko
Fillon: zvataurwa na Éliane Houlette kune nyaya yacho zvachinja? - VIDEO
🔴 【NYAYA dzePARADISE】 🔴 8 telenovelas nyeredzi dzakafa uye iwe wausingazive ...